I-Nano-silver isetshenziselwa izakhiwo zayo ezilwa namagciwane ukuze iqinise izinto zokwelapha kwezesayensi yezokwelapha kanye nezinto ezibonakalayo. I-Ultrasonication ivumela ukwakheka okusheshayo, okusebenzayo, okuphephile futhi okuphathelene nemvelo kwe-nanoparticles eyindilinga emanzini. I-Ultrasonic nanoparticle synthesis ingalinganiswa kalula kusuka kokukhiqizwa okuncane kuya kokukhulu.
I-Ultrasonically-Isizwe i-Synthesis ye-Colloidal Nano-Silver
I-Sonochemical synthesis, okuyindlela yokusabela yokwenziwa ngaphansi kwe-irradiation ye-ultrasonic, isetshenziswa kabanzi ukukhiqiza ama-nanoparticles afana nesiliva, igolide, i-magnetite, i-hydroxyapatite, I-Chloroquine, I-Perovskite, i-latex nezinye izinto eziningi ze-nano-materials.
I-Ultrasonic Wet-Chemical Synthesis
Ngezinhlayiya zesiliva ze-nano-, imizila eminingana eyenziwe ngosizo ngokuqina iyaziwa. Ngezansi, kwethulwa umzila wokuqamba we-ultrasonic usebenzisa uju njengabanciphisi kanye nama-ligand capping agents. Izakhi zoju ezifana ne-glucose ne-fructose zinesibopho sendima yazo njengazo zombili i-caps kanye nokunciphisa i-ejenti kwinqubo yokuqamba.
Njengezindlela ezivame kakhulu ze-nanoparticle synthesis, i-ultrason nano-silver synthesis iwela ngaphansi kwesigaba se-chemistry emanzi, nayo. I-Ultrasonication inyusa i-nucleation yesiliva-nano-izinhlayiyana ngaphakathi kwesisombululo. I-nucleation ekhushulwe nge-ultrasonically yenzeka lapho umphambi wesiliva (isiliva ion tata), isb. Nitrate yesiliva (i-AgNO3) noma i-silver perchlorate (i-AgClO4), incishiswa kwisiliva le-colloidal lapho kukhona i-ejenti yokunciphisa, efana noju. Ngaphansi kwesimo sokuthi ukugcotshwa kwama-ion wesiliva kwisixazululo kukhuphuka ngokwanele, ama-ion esiliva ancibilikisiwe ahlangana ndawonye futhi akha indawo ezinzile. Lapho ukuhlangana kwama-ion esiliva kusekuncane, kuba yisimo esingesihle ngenxa yebhalansi yamandla engemihle. Ibhalansi yamandla engemihle yenzeka njengoba amandla atholakala enciphisa ukuqoqwa kwezinhlayiya zesiliva ezincibilikisiwe aphansi kunamandla asetshenziswa ngokwakha indawo entsha.
Lapho iqoqo lifinyelela emisebeni ebucayi, okuyiphuzu lapho iba nomusa ngamandla, lihlala liqinile ngokwanele ukuqhubeka likhula. Ngesikhathi sesigaba sokukhula, ama-athomu esiliva amaningi ayavela ngesisombululo bese enamathela ngaphandle. Lapho ukuqoqwa kwesiliva kwe-athomu encibilikisiwe kuncipha kuze kube seqophelweni elithile, umkhawulo we-nucleation ufinyelelwa ukuze ama-athomu angakwazi ukubopha isikhathi eside ndawonye ukuze akhe i-nucleus eqinile. Kulesi sinqenqemeni se-nucleation, ukukhula kwama-nanoparticles amasha kuyaphela, bese isiliva elincibilikisiwe lidonswa ngokufakwa kwi-nanoparticles ekhulayo kusisombululo.
I-Sonication ikhuthaza ukudluliselwa kwesisindo, okusho ukuthambisa kwamaqoqo, okuholela ekuqanjweni kwejubane ngokushesha. Nge-sonication elawulwa ngokufanele, isilinganiso sokukhula, usayizi, nokwakheka kwezakhi ze-nano-particle kunganqunywa.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi ngenye indlela eluhlaza ukuze uhlanganise nano-isiliva usebenzisa i-carrageenan!
Ukuqhathanisa izindlela ezijwayelekile nezindlela zokuhlanganiswa okuluhlaza kokuhlanganiswa kwe-nanoparticle.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Nano-Silver Synthesis
ukusabela kwembiza eyodwa
kwezemvelo-inobungane, chemistry eluhlaza
UP400St – i-400 watts enamandla e-ultrasonicator yokwenza i-sonochemical synthesis ye-nano-izinhlayiya
Case Study ye-Ultrasonic Nano-Silver Synthesis
Izinto zokwakha: isiliva nitrate (AgNO3) njengesandulelo sesiliva; uju njenge-capping / ejenti yokunciphisa; amanzi
Idivayisi ye-Ultrasonic: UP400St
I-Ultrasonic Synthesis Protocol
Izimo ezinhle kakhulu zokwakha ama-nanoparticles e-colloidal esiliva atholakele ukuthi alandelayo: Ukunciphisa i-nitrate yesiliva ngaphansi kwe-ultrasonication kuhlanganiswe uju wemvelo. Kafushane nje, i-20 ml yesisombululo se-nitrate yesilivere (0.3 M) equkethe uju (20 wt%) ivezwe imfucumfucu ephezulu yokuqina kwe-ultrasound ngaphansi kwezimo ezingama-30 min. I-Ultrasonication yenziwa nge-probe-Type ultrasonicator I-UP400S (400W, 24 kHz) cwiliswa ngqo kwikhambi lokuphendula.
Ukusatshalaliswa kosayizi oyinxenye yama-Ag-NPs ahlelwe ngezimo ezinhle; ukugxila kwesiliva (0.3 M), ukugxila kwezinyosi (20 wt%), nesikhathi se-irradiation se-ultrasonic (imizuzu engama-30)
Umthombo wesithombe: Oskuee et al. 2016
Uju olunamazinga wokudla lusetshenziselwa ukukhipha / ukuqinisa nokunciphisa umshini, okwenza isixazululo samanzi se-nucleation kanye ne-nanoparticles etholakalayo ihlanzeke futhi iphephe ezinhlelweni eziningi.
Njengoba isikhathi se-ultrasonication sanda, ama-nanoparticles esiliva aba mancane futhi ukugxila kwawo kuyathuthukiswa.
Kwikhambi lezinyosi elinamanzi, i-ultrasonication iyinto ebalulekile ethonya ukwakheka kwezinhlayiya zesiliva. Amapharamitha e-Sonication afana ne-amplitude, isikhathi nokuqhubeka ngokudonsa i-ultrasound kuyizinto ezinkulu ezivumela ukulawula usayizi kanye nenani lezinhlayiya zesiliva.
Umphumela we-Ultrasonic Synthesis weSilver Nanoparticles
Ingxubevange ye-ultrasonically ekhuthaziwe, ehlanganisiwe enoju UP400St kuholele ekutheni i-nano-izinhlayiyana zesiliva (i-Ag-NPs) zibe nesilinganiso sezinhlayiyana ezibalelwa ku-11.8nm. Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic kwe-nano-izinhlayiya zesiliva kuyindlela elula futhi esheshayo yembiza eyodwa. Ukusetshenziswa kwamanzi noju njengezinto zokwakha, kwenza ukuphendula kungabizi kakhulu futhi kube nobungani bemvelo.
Indlela esethukile yokwakheka kwe-ultrasonic isebenzisa uju njengokwehlisa kanye nokufaka i-ejogini ingadluliselwa kwezinye izinsimbi ezinhle, njengegolide, i-palladium ne-zethusi, enikezela ngokusetshenziswa okuhlukahlukene okuvela kumithi kuya embonini.
I-TEM image (A) nokusatshalaliswa kosayizi bayo okuyizinhlayiyana (B) kwama-Ag-NPs akhiwe ngezimo ezinhle.
Ithonya I-Nucleation kanye no-Particle size yi-Sonication
I-Ultrasound inika amandla ukukhiqizwa kwezinhlayiya ze-nano-ezinjenge-nano-izinhlayiya zesiliva ezihambisana nezidingo. Izinketho ezintathu ezijwayelekile ze-sonication zinemiphumela ebalulekile kulokhu okuphumayo:
Sonication yokuqala: Ukusetshenziswa okufushane kwamagagasi e-ultrasound kusisombululo esisezingeni eliphezulu kungaqala ukwenziwa kwe-seeding nokwenziwa kwe-nuclei. Njengoba i-sonication isetshenziswa kuphela ngesikhathi sesigaba sokuqala, ukukhula okulandelayo kwekristalu kuqhubeke kungathintwanga okubangela amakristalu amakhudlwana.
Sonication okuqhubekayo: Ukuchuma okuqhubekayo kwesixazululo se-supersaturated kuphumela kumakristalu amancane ngoba i-ultrasonication engaphendulwanga yakha i-nuclei eningi okuholela ekukhuleni kwamakristalu amaningi amancane.
I-sonication eqhutshwayo: I-Pulsed ultrasound isho ukusetshenziswa kwe-ultrasound ngezikhathi ezithile ezimisiwe. Ukufakwa okulawulwa ngokuqondile kwamandla e-ultrasonic kuvumela ukuthonya ukukhula kwe-crystal ukuze kutholakale usayizi we-crystal ofananiswe.
I-High-Performance Ultrasonicators ye-Synthesis
I-Hielscher Ultrasonics inikeza amaprosesa anamandla nathembekile we-ultrasonic wezinhlelo zokusebenza ze-sonochemical kufaka phakathi i-sono-synthesis kanye ne-sono-catalysis. Ukuxubana kwe-Ultrasonic nokusabalalisa kukhulisa ukudluliselwa kwesisindo futhi kukhuthaza ukugcotshwa kwamanzi nokulandela okulandelayo kwamaqoqo e-athomu ukuze kunqume izinhlayiya ze-nano-. I-Ultrasonic synthesis ye-nano-izinhlayiya ziyindlela elula, engabizi, esebenzayo, esebenzayo, esheshayo futhi ephephile.
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinqubo ezinamandla futhi ezinqwabelana kahle ze-Ultrason for the nucleation kanye nokushiswa kwezinsimbi ze-nano-materials. Wonke amadivaysi edijithali afakelwe isoftware enobuhlakani, isibonisi sokuthinta ngombala, ukuqoshwa kwedatha ye-othomathikhi ekhadini le-SD-ekhethiwe futhi kufaka imenyu enembile yokusebenza okusebenziseka kalula nokuphephile.
Ukumboza uhla oluphelele lwamandla kusuka kuma-watts angama-50 athathwa ngesandla ama-watts kuze kufike kuma-watts ayi-16,000 wezinhlelo ezinamandla zezimboni ze-Ultroke, i-Hielscher inesethi ekahle yokusetshenziselwa uhlelo lwakho. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Izinhlayiya zesiliva ziyizinhlayiya zesiliva ezinobukhulu obuphakathi kwe-1nm ne-100nm. Ama-nanoparticles esiliva anendawo enkulu kakhulu engaphezulu, evumela ukuhlangana kwenqwaba yama-ligands.
Ama-nanoparticles esiliva anikezela izakhiwo ezihlukile zokukhanya, zikagesi, nezamandla ezenza zibaluleke kakhulu kwisayensi yezinto ezibonakalayo nentuthuko yomkhiqizo, isb, i-Photovoltaics, i-elekthronikhi, ama-inki wokuhambisa, izinzwa zezinto eziphilayo / zamakhemikhali.
Olunye uhlelo lokusebenza, eselivele selusungulwe kabanzi, ukusetshenziswa kwama-nanoparticles esiliva okwengubo yokuthambisa antimicrobial, nezindwangu eziningi, amakhibhodi, ukugqokwa kwamanxeba, namadivayisi we-biomedical manje kuqukethe ama-nanoparticles esiliva aqhubeka akhipha inani eliphansi lama-ion esiliva ukuhlinzeka ngokuvikela kumagciwane .
Izinhlayiya zesiliva nano-isetshenziswa ekwenziweni kwendwangu, lapho ama-Ag-NPs esetshenziselwa ukwakheka izindwangu zikotini ngemibala eguquguqukayo, amandla okulwa ne-antibacterial, kanye nezinto zokuzilapha ze-superhydrophobic. Indawo ye-antibacterial yesiliva-nano-izinhlayiya ivumela ukukhiqiza izindwangu, ezilulaza iphunga elithathwe ngamagciwane (isib. Iphunga lokujuluka).
I-anti-Bacterial Coating for Medicine and Supply Medical
Izinhlayiya zesiliva nano-zinhlobo zibonisa ama-anti-bacterial, anti-fungalative kanye ne-antioxidative, ebenza bahehe ngohlelo lwe-phamaceutical and medical, isb, umsebenzi wamazinyo, izinhlelo zokuhlinzwa, ukwelashwa kokupholisa amanxeba, kanye namadivayisi we-biomedical. Ucwaningo selukhombisile ukuthi isiliva nano-izinhlayiya (i-Ag-nPs) zivimbela ukukhula nokuphindaphindeka kwama-bacterium ahlukahlukene njenge Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Citrobacter koseri, Salmonella typhii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Vibrio parahaemonia . Umphumela we-anti-bacterial / anti-fungal umphumela utholakala ngezinhlayiya zesiliva ezingena emangqamuzaneni futhi ubopha ama-Ag / Ag + ion kuma-biomolecule asemangqamuzaneni amancane ukuze umsebenzi wawo uphazamiseke.